Jubbaland oo sheegatay in ay gacanta ku dhigtay degmada Beled Xaawo – Xorriya Online
Jubbaland oo sheegatay in ay gacanta ku dhigtay degmada Beled Xaawo
Madaxweyne ku xigeenka DG Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay BBC-da ayaa sheegaya in ciidamada maamulkaas ee la socda Wasiirkooda Amniga Cabdirashiid Cabdinuur Janan ay gacanta ku dhigeen Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in ciidamada Wasiir Janan la socda lagu weeraray duleedka Beled Xaawo, balse iska caabbin ay sameeyeen ay u suuragashay in ay gudaha u galaan Magaaladaas.
“Xalay saqdi dhexe baa Ciidankii daraawiishta Jubbaland ee dusha Beled xaawo fadhiyay tan & 2-dii Maarso 2020 lasoo weeraray way iska caabbiyeen, waxaana la isla galay gudaha Magaalada oo Gacantooda soo gashay, Ciidanka xamar laga keenay ee jabhadda aan ku tilmaamnay waa laga gacan maroojiyay gacan ku heynta Beled Xaawo, ilaa haatan xabaddu waxa ay ka socotaa daafaha Magaalada.” Sidaasi waxaa yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Madaxweyne ku xigeenka DG Jubbaland ayaa sheegay in marar kala duwan ay ka baaqsadeen dagaalka Beled xaawo balse saddexdii Cishe ee lasoo dhaafay ay la socdeen dhaq-dhaqaaqyo xooggan oo lagu abaabulay duullaan lagu wajahayo sida uu hadalka u dhigay.
Si kastaba, qoraal xalay kasoo baxay Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in jabhad ay soo abaabushay Dowladda Kenya ay duullaan ku qaaday Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.